Musika weZimbabwe Stock Exchange Unodonha Mushure meSarudzo
Nyamavhuvhu 05, 2013
WASHINGTON DC — Musika wemari weZimbabwe Stock Exchange unonzi neMuvhuro wadonha zvikuru nemapoinzi anodarika zvishoma makumi maviri nemashanu (25.64 points), kana kuti zvikamu gumi nechimwe (11.09%), muzuva rekutanga kubva pakaziviswa nezvakabuda musarudzo.
Zimbabwe Stock Exchange yazivisa kuti musika wayo wemari wavhara uri pamapoinzi mazana maviri nemashanu nechidimbu, (205.57 points) zvichitevera kurasikirwa kwemakambani makuru akaita seDelta iyo yarasikirwa nemasendi makumi matatu ikasara yave pamasendi zana nemakumi maviri.
Mamwe makambani makuru ane mitengo yemasheya yadzika anoti Innscor iyo yarasikirwa nemasendi gumi nemashanu, Econet yadzika nemasendi gumi, kuchitiwo Edgars neOK Zimbabwe idzo dzarasikirwa nemasendi mana pakambani.
ZSE yati makambani maviri chete anoti ZHL neOld Mutual ndiwo akwanisa kuita zviri nani.
Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dzati izvi zvinoratidza kuti vanodyara mari dzavo vari kuda kutanga vamboona kunowira tsvimbo nedohwe munyaya dzezvematongerwo enyika.
VaGodfrey Kanyenze vanove nyanzvi mune zveupfumi uye vachitungamira sangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vatiwo kuderera uku kwakakosha kwazvo sezvo misika ichishanda nemamiriro anenge akaita zvinhu panguva iyoyo.
“Zvichitevera sarudzo dzinokosha idzi zvave kureva kuti vanoda kudyara mari dzavo vave kusema musika wemari uyu,” vadaro VaKanyenze.